'विज्ञापन गर्नु खर्च होइन, लगानी हो' - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रबार, पौष १८, २०७१
‘विज्ञापन गर्नु खर्च होइन, लगानी हो’
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः
विज्ञापन व्यवसायीसामु के के चुनौती छन्?
सरकारले विज्ञापनसँग सम्बन्धित नीति–नियम बनाएको छैन, विदेशी टीभीबाट उतैका विज्ञापन प्रसारण भइरहेका छन्। विज्ञापनदाताहरू पनि विज्ञापनलाई खर्चको रुपमा हेर्छन्। जबकि, यो वस्तु वा सेवालाई ब्रान्डिङ गर्ने लगानी हो। विज्ञापन व्यवसायीहरू पनि पूर्ण व्यावसायिक हुन नसक्दा विज्ञापन बजारको आकार अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन।
विज्ञापन बजारको आकार बढाउन के गर्नु पर्ला?
हाम्रो विज्ञापन बजार साढे चारदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। त्यसमध्ये छापामाध्यममा ४० प्रतिशत, रेडियो–टीभीमा २५ प्रतिशत, अनलाइनमा ५–६ प्रतिशत, होर्डिङ बोर्ड, वाल पेन्टिङ जस्ता आउटडोर मिडियामा १० प्रतिशत, प्रदर्शनीमा ८–१० प्रतिशत र बाँकी डाइरेक्ट मार्केटिङ, गिफ्ट आदिले ओगटेको छ। विज्ञापनमा गरिने लगानीलाई खर्च ठान्नु र टीभीमा विदेशका विज्ञापन बज्नु अहिलेका मुख्य चुनौती हुन्।
‘क्लिन फिड’ गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको पनि ८–१० वर्ष भइसक्यो नि!
विदेशी टीभी च्यानलमार्फत प्रसारित विज्ञापनलाई ‘क्लिन फिड’ गरेर नेपालकै विज्ञापन प्रसारण गर्नुपर्दछ। मस्यौदा भएको विज्ञापन नीतिलाई सरकारले चाँडो ल्याइदिने हो भने विदेशी टीभीमा आउने विज्ञापन रोकिएर हाम्रो विज्ञापन बजारमा रु.३ अर्बसम्मको वृद्धि हुन्छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनहरूमा स्वदेशी कलाकारले अभिनय गर्न नमिल्नुको कारण के हो?
स्वदेशी कलाकारले अभिनय गर्दा रु.५० करोडभन्दा धेरै विज्ञापन बढ्छ। यसका लागि पनि नीति नै चाहियो। तर, सरकारले बनाएको मस्यौदामा पनि ‘डबिङ विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्ने’ मात्र भनिएको छ।
विज्ञापन आचारसंहिता ल्याउने बेला भएन र!
अहिले विज्ञापन व्यवसायी आफैंले विचार गरेर के गर्न हुने के गर्न नहुने निर्धारण गरिरहेका छन्। पूर्ण व्यावसायिक हुन पनि आचारसंहिता अनिवार्य भएकोले मेरै कार्यकालमा ल्याउने विचारमा छु।